Man United Oo Laga Reebay Tartanka Champion League+Sawiro | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Man United Oo Laga Reebay Tartanka Champion League+Sawiro
Kooxda Sevilla ayaa u soo baxday siddeed dhamaadka UEFA Champions League kadib markii ay Old Trafford guuldaro xanuun badan ku baday Manchester United waxaana kulankan laba gool oo deg deg ah ku go’aamiyay Wissam Ben Yedder oo kaydka ka soo baxay si uu Jose Mourinho iyo kooxdiisa uga cidhibtiro UEFA Champions league.
Manchester United ayaa markale Sevilla kala hortagay qaab ciyaareed liitay laakiin markan wiilasha Jose Mourinho ayaa ku fashilmay in ay garoonkooda iyo jamaahiirta kooxdooda ay wax guul ah ku gaadhaan. Rajadii Man United ee koobka UEFA Champions League ayaa ku soo dhamaatay Old Trafford iyada oo Wissam Ben Yedder uu noqday mucjisada Mourinho iyo jamaahiirta kooxdiisa iska horkeenay.
Manchester United oo marti loo ahaa Old Trafford ayaa qaybtii hore ee kulankan soo bandhigtay qaab ciyaareed aad u liitay waxayna ahayd kooxda Sevilla tan shaqada ugu badan garoonka ka qabtay isla markaana inta ugu badan kubbada maamulaysay waxayna jamaahiirta United daawanayeen kooxdooda oo markale Old Trafford kubbada looga gacan sareeyo laakiin Mourinho ayaa doonayay in kooxdiisu ay raadsato fursado gool dhalineed.
Manchester United ayaan qaybtii hore inta badan helin fursado badan oo xerada ganaaxa Sevilla ah waxayna ku dhibtoonayeen laakiin kooxda Sevilla lafteeda ayaa ku fashilantay in fursadihii ay heshay iyo waliba kubbad bixintii badnayd ee ay samaysay ayna uga faa’iidaysan in ay wax goolal ah kula timaado.
DAQIIQADII 14 AAD Eric Bailly ayaa ku sigtay in lagu ciqaabo qalad wayn oo uu sameeyay isaga oo si liidata kubbad ugu gacan galiyay Sevilla waxaana markiiba weerar ka dhisay cidhifka xerada ganaaxa Man United labada xidig ee kala ah Correa iyo Muriel laakiin Muriel ayaa ku fashilmay in uu darbadiisa si toos ah ugu toogto goolka.
Ciyaarta ayaa noqotay mid laysku mari waayay iyada oo koox kastaaba taxadar badan ka samaynaysay in difaaceeda ay qalad ka samayso laakiin waxay noqotay ciyaar aan si sahlan goolal lagu kala dhalin karin halka United ay u muuqatay mid aan fursad badan abuurayn.
DAQIIQADII 37 AAD Ugu danbayn Manchester United ayaa heshay fursad gool dhalineed kadib markii uu Fellaini kubbad hal-ka-laba ah uu la soo ciyaaray Sanchez laakiin fursada uu doonayay in uu ku dhaliyo goolka furitaanka ayuu iska joojiyay goolhaye Rico.
Si kastaba ha ahaatee,qaybtii hore ee ciyaarta ayaa noqotay mid ayna Manchester United iyo Sevilla waxba kaga badalin natiijadii kulankii lugtii hore waxaana 45 kii daqiiqo ee qaybtii hore ee kulankan lagu kala nastay barbaro gool la’aan ah.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta koox kastaaba waxay maanka ku haysay in 45 daqiiqo ay u jirto in ay u soo baxdo wareega siddeed dhamaakda UEFA Champions League kama ka hadhitaankiisa waxayna koox kastaaba laba jibaartay shaqadii ay soo qabtay.
Laakiin ciyaarta ayaa waqti dheer sii ahaatay qaabkii gool la’aanta ahaa iyada oo fursad kasta oo ay labada kooxood weerar ku soo dhisayeen ay noqonaysay mid aan guulaysan laakiin daqiiqadii 60 aad Mourinho ayaa go’aansaday in uu ciyaarta soo galiyo Paul Pogba wuxuuna badalay Fellaini.
DAQIIQADII 72 AAD Sevilla ayaa markeeda samaysay isbadalkii ugu horeeyay waxaana ciyaarta laga saaray Muriel oo fursado fiican lumiyay waaxana ciyarta soo galay Wissam Ben Yedder waxaana la galay waqtigii ugu cadaadiska badnaa ciyaarta.
DAQIIQADII 74 AAD Alla Maxay Saamayn Fiican ahayd? Xidiga kaydka ka soo baxay ee Wissam Ben Yedder ayaa si layaableh ciyaarta saamayn ugu yeeshay isaga oo markiiba gool si cajiib ah looga soo shaqeeyay shabaqa David De Gea ku hubsaday wuxuuna ciyaarta ka dhigay 1-0 ay ugu danbayn Sevilla ku jabisay daqiiqado badan oo gool la’aan lagu soo jiray.
Wissam Ben Yedder ayaa fiican uga dhex boos qaatay difaaca Man United wuxuuuna dhulka dhigay Eric Bailly oo ahaa difaaca ugu danbeeyay ee goolka ka xigay ka hor intii aanu De Gea ku toogan darbo aanu wax xal ah u helin waxaana kubbad caawin cajiib ah soo sameeyay Pablo Sarabia.
DAQIIQADII 77 AAD Jose Mourinho ayaa hal mar ciyaarta ka wada saaray Antonio Valencia iyo Jesse Lingard wuxuuna safka kooxdiisa ku soo xoojiyay Anthony Martial iyo Juan Mata maadaama oo ayna markan jirin wayso u dhawran iyo wax uu difaacdaa waxaana looga baahnaa in ugu waqti kooban ay soo laabsho ku samayn karaan.
DAQIIQADII 78 AAD Cajiib, Cajiib Cajiib! Kooxda Sevilla ayaa halkii laga filayay in ay difaacanayso goolka ay heshay waxayba si layaableh ula timid goolkeeda labaad ee ay xalaada musiibada ah ugu sii abuuray Manchester United, waxaana markale goolka labaad u saxiixay xidiga Red Devils cudurka ku noqday ee Wissam Ben Yedder kaas oo gool madax ah ku garaacay David De Gea iyo Young waxayna ciyaartu noqotay 2-0 ay Sevilla hogaanka ciyaarta ku dheeraysatay.
Wissam Ben Yedder ayaa awooday in uu Young kaga awood batay kubbada uu madax ku darbeeyay laakiin De Gea ayaa markii hore kubbada iska joojiyay laakiin waxay iskula dhex dhaceen shabaqa isaga oo kubbada goolka ku soo dhex dhacday uu dib iskaga soo celiyay.
DAQIIQADII 82 AAD Romelu Lukaku ayaa ugu dhawaaday in uu Manchester United u keeno hal gool laakiin waxa uu darbadiisa u diray banaanka birta goolka inkasta oo uu haystay fursad fiican.
DAQIIQADII 84 AAD Romelu Lukaku ayaa woxogaa soo nooleeyay rajadii Man United ee sii muuqbeelaysay kadib markii uu si cajiib ah u dhamaystiray kubbad uu Rashford koorne ka soo tuuray waxayna ciyaartu noqotay 2-1 ay wali Sevilla hogaanka ciyaarta ku hayso laakiin United ayaa wali looga baahnaa laba gool oo kale si ay u soo bixi karto.
Manchester Unnited ayaa wax walba iskugu gaysay weerarkeeda laakiin waxaa iswaydiin mudan maxay ahayd sababtii aanu Mourinho markii hore aanu weerar noocan oo kale ah ku ciyaarin isaga oo garoonka kooxdiisa marti loogu yahay.
DAQIIQADII 90+1 aad Ben Yedder ayaa ugu dhawaaday in uu dhamaystirto saddexley goolal ah kadib markii uu si toos ah ugu soo baxay goolhaye David De Gea kaas oo markan awooday in uu si layaableh uu Ben Yedder uga beeniyay goolka saddexaad.
Ugu danbayn dadaalkii uu Mourinho waqtiga danbe ku doonayay in uu qaabkii Crystal Palace ugu soo laabto ayaa fashilmay waxayna Sevilla awooday in Man United oo Old Trafford joogtay ay iskugu dartay guuldaro iyo waliba in ay ka cidhibtirtay UEFA Champions League.